Safidy anatiny | safidy
Ny bilaogy tena an'ny mpanorina Option Helmut Melzer momba ny fiaviany, ny fampandrosoana ary ny fivoarana amin'ny safidy sy ny korontana isan'andro.
ny Helmut Melzer 2. Jolay 2019, 15: 19 18.3k Views
Amin'ny fampandrosoana ny safidy.news ...
sary rehetra: Option / Shutterstock
Photo / Video: Option.
#1 Option.News dia ao amin'ny Internet
Farany, tonga ny fotoana: Ny tranokala vaovao an'ny Option www.option.news dia misy amin'ny Internet! Raha tsy manitatra ny tsy manam-paharoa amin'ny Internet. Satria ny safidy dia lasa eo amin'ny sehatra media sosialy, toy ny Facebook - tsy misy dikany. Global sy nadika amin'ny fiteny 104.
Ity hetsika ity dia manome fotoana lehibe ho an'ny faharetana, olan'ny fiarahamonim-pirenena ary ireo safidy tsara. Satria tsy toy ny tambajotra sosialy hafa dia tsy vitan'ny namana sy mpanaraka voasoratra anarana ihany ireo lahatsoratra, fa mety ho an'ny olona rehetra - amin'ny fitenin-drazany ihany. Ka rehefa mamorona lahatsoratra ianao ary mitatitra ny hevitra manantena, fandraisana andraikitra, na fivoarana ao amin'ny firenenao, dia hiparitaka manerana an'izao tontolo izao izany impetus izany. Araka izany, ny safidy.news dia misolo tena, famindrana fantatra maneran-tany amin'ny resaka fifandimbiasana mahomby amin'ny ho avy.
Ary tsy miresaka momba ny doka ho an'ny firenena manana demokrasia mafy fotsiny aho, fa indrindra amin'ireo autocrasiana maro eto amin'izao tontolo izao izay azon'ny olompirenena mampiasa vahaolana ary mihoatra ny herim-po rehetra hanaovana fiovana tsara.
Toy izany koa no marina: Tsy mahafinaritra ve ny mandre voalohany momba ireo olan'ny firenena tsy dia miraharaha? Firenena tsy voalaza amin'ny haino aman-jery mahazatra. Ireo olona tsy manana lobby - ary mila ny fanampiantsika.
Ny tanjon'ny safidy.news dia tena mazava: mamorona hoavy tsara kokoa! Manerantany sy ho an'ny olona rehetra. «Misy ady momba ny Internet eo amin'ny Internet. Te hanampy aho hanaparitaka votoaty mahomby, "hoy ny nanoratra iray amin'ireo mpikambana mavitrika voalohany amin'ny safidy.news. Ary tena tsara izany, nomena fankahalana, vaovao sandoka, fampielezankevitra ary fanaovana tombony amin'ny net.
Azonao atao izao ny mandray anjara amin'ny fivoarana manerantany. Mamaky amin'ny Internet amin'ny option.news izahay mivady!
Ary miangavy, ampitao izany!
nampian'i Helmut Melzer 18. Aogositra 2019, 9: 24
#2 Inona no nitranga hatreto ...
Mpanao gazety nandritra ny taona maro aho ary tsara vintana hatrany nahazo asa be karama. Tsy resaka raharaha intsony izy ireo ankehitriny. Lafo ny mpiasa ary amin'ny fotoana tsy voafetra, maniry ny fiverenan'ny mpamatsy vola isan-taona ny volon'izy ireo - na manao ahoana na manao ahoana ny asa, miova ny tontolon'ny haino aman-jery ... Raha fintinina: Tsara vintana aho - ary angamba valiny tsara ho an'ny asa. Ankoatr'izay, nahafantatra tsara ny endrika rehetra aho - manao pirinty gazety, gazety isan'andro ary isan-kerinandro, ary koa amin'ny Internet - izay manampy ahy indrindra amin'ny safidy.
Saingy ny fivoaran'ny sehatry ny haino aman-jery dia tena mampitolagaga - ary manazava ny antony mahatonga ny haino aman-jery eto an-dafy amin'ny maha-izy azy: voalohany indrindra ny tombotsoan'ny tombom-barotra, matetika tsy misy etika matihanina ary tsy misy fanoloran-tena marina, tsy misy ny tena fialamboly ary ny fialamboly ho an'ny vahoaka…
Tamin'izay fotoana fohy talohan'ny 2014, ampy ho ahy ary nanapa-kevitra ny hamoy ny asako tena karama aho amin'ny maha-tompon-dahatsoratra, ho tonga mpanoratra. Tsy misy fanontaniana: fanapahan-kevitra manankarena.
Fa inona no mahasintona ny fomba fijerinao amin'ny fanaovan-gazety, ka ny hevitro? Ny valiny, aorian'ny fisaintsainana lava: asio safidy hafa, indrindra raha misy ilana fanoloana hafa, satria maro ny zavatra diso. Ary rehefa manomboka manontany ny zava-drehetra ianao, tsy ho ela dia mahatsapa: Raha ny marina, dia mila safidy manisy dikany ianao na aiza na aiza. Tsy azontsika ierana ny sangan'asa amin'ny antsasaky ny fampandrosoana ny fiaraha-monina maoderina! Na dia marina ihany aza.
Eny ary, tamin'ny fararano 2013 dia teraka ny hevitra ho an'ny Safidy, dia niseho ny laharana voalohany amin'ny magazine printy tamin'ny aprily 2014. Ary araraoty, mbola misy izany ankehitriny. Minoa ahy, tsy nieritreritra momba ny resaka 2 aho tamin'ny voalohany.
nampian'i Helmut Melzer 19. Aogositra 2019, 15: 24
7. Septambra 2019 ao amin'ny 17: 14
Arahabaina, tohizo hatrany! Tiako foana ny aingam-panahy avy amin'ny safidy ...
Karin Bornett hoy:
21. Aogositra 2019 ao amin'ny 10: 13
Fanapahan-kevitra tsara! Tsara fa nanaporofo tsara izy. Mandritra ny taona 5 manaraka sy bebe kokoa more
#3 Ny hitsambikina anaty rano mangatsiaka
Mazava ho azy, ho ahy dia tsy mihoatra ny magazine na tranonkala ny safidiko. Safidy dia dingana fampandrosoana hatramin'ny voalohany - ho ahy manokana, ary manantena anao! Ny dingana tsirairay dia ny fananganana ilay gazety pirinty, fanatsarana azy ary noho izany dia tena afa-po amin'ny 2018 / 2019 aho. (Tsy maintsy manamarika vetivety eto aho fa saika manao ny zava-drehetra aho: fakana sary, lamina, marketing, fampivoarana tranonkala, sns. Raha tsy izany dia tsy ho vita ara-bola ny zavatra ataoko.)
Ary mazava ho azy dia safotra ihany koa ny safidy amin'ny rano mangatsiaka. Fa akoho, hazo lava no azy. (Mazava ho azy fa manankarena ihany koa ity.) 2018 efa nanangona momba ny asa miaraka amin'ilay tranokala teo aloha aho, fahalalana tsara ny fomba hiatrehana ny fampandrosoana tranonkala (sy vahaolana vahaolana amin'ny rahona, sns). Ary hitako fa mandritra izany fotoana izany, ny loharanon-karena sy fahaiza-manao lehibe dia afaka mamorona miaraka amin'ny loharanom-pahalalana kely izay ny orinasa lehibe ihany no afaka folo taona lasa izay.
Noho izany dia nandeha tamin'ny dingana iray fanampiny aho - miaraka amin'ny safidy ary eo amin'ny fivoarako ihany koa - ary namolavola ilay tranonkala efa nisy avy tamin'ny safidy mankany amin'ny sehatra media sosialy. Nivoatra ny fahalianana dia nipoitra ny hevitra ho amin'ny dingana manaraka: sehatra media sosialy manerantany momba ny faharetana sy ny fiarahamonim-pirenena izay vakiana manerana ny fiteny rehetra. Aretin'izao tontolo izao! Mahaleo tena ary tsy misy tombony ara-toekarena voalohany! Tena manana izany. Ary tsy mitenena fotsiny aho satria manao izany.
Raha ny lafiny, ny sary ihany koa dia rakotry ny Option #21 misy ny lohateny: "Lohataona - ho fomba fisainana tsara sy manorina"
nampian'i Helmut Melzer 19. Aogositra 2019, 15: 25
#4 Manantena toekarena etika / maharitra
Nanontany ahy matetika aho hoe maninona no mihazakazaka Option amin'ny maha-orinasa ahy ary tsy nanangana klioba na ONG / NPO. Ity manaraka ity: hitako Option Medien e.U. - izany no anarana ofisialy voarakitra ofisialy, orinasa tsy miankina iray - ho tranokala famoaham-bahoaka mifantoka amin'ny tombontsoam-bahoaka miaraka amin'ny didim-piarahamonim-pirenena. Ankoatra ny fananganana tsotra sy ny maha-birao ny maha-birao azy (tsy mampino) dia fantatro ihany koa ny fomba fiasa izay tena inoako tanteraka: afaka manova ny fiarahamonintsika amin'ny fomba tsara fotsiny isika. Ary raha hifaninana amin'ny orinasa mahazatra ny orinasa etika / maharitra, dia mety handresy izany - farafaharatsiny, - ny taloha. Ka inona moa raha hitondra saika ny toe-karena rehetra isika raha te haharitra? Raha ny hevitro dia tsy ny fanerena ny mpanjifa mahatsikaritra no tena leverage, fa ny fitomboan'ny orinasa maharitra maharitra izay mampitombo ny fanerena amin'ny politika. Raha ny toe-karena dia manao izany, afa-tsy amin'ity toe-javatra ity, ny toekarena "tsara". Koa ireo tena nanova ny lalao dia mpandraharaha misaina tsara.
Amin'ny lafiny iray, Option dia mpikambana ao amin'ny Gemeinwohl-Wirtschaft sy SDG Aotrisy:
#5 Ny fandikan-teny mandeha ho azy amin'ny option.news
Efa herinandro maromaro izao no niasa tamin'ny Option aho: miasa ny fandikan-teny anio. Asa sarotra izany. Izany dia mahatonga ny fanaovana ny votoaty hahatakatra ny olona rehetra eto amin'ity tany ity. Mazava fa tsy tonga lafatra ny dikan-teny ireto fa zavatra iray ihany no ataontsika: afaka miresaka momba ny ho avy tsara isika tsy misy sakana amin'ny fiteny ary manerantany.
Ary inona no lazainao tsara momba ny fahadisoana maro: Tsy kabary fa endrika io.
Ny famoahana feo tsirairay dia azo atao amin'ny fotoana rehetra amin'ny fiteny rehetra amin'ny fisafidianana fotsiny ilay fiteny notadiavina ao amin'ny boaty havanana ambony.
nampian'i Helmut Melzer 12. Septambra 2019, 15: 55
#6 FIDERANA AN-TANY.NEWS - Fizarana 1
Mbola mandefa amin'ny Facebook & Co ve ianao? Betsaka ny antony mahatonga antsika ho mavitrika amin'ny safidy. Iray amin'ireo zava-dehibe indrindra: Mahatratra olona be dia be tokoa ianao. Nahoana? Satria ny adiresy safidy rehetra dia mitoetra an-tserasera amin'ny fotoana maharitra ary mitanisa ao amin'ny milina fikarohana! Satria ny safidy dia tontolo tsy manam-paharoa, misokatra sy mangarahara (misy tsy fahita amin'ny toerana misy ny mpizara any Vienna) ary na dia asehony aza ireo fomba fijery ankehitriny. Ary afaka mahatratra olona an'arivony ao anatin'ny fotoana fohy izy ireo - 4 volana monja aorian'ny fanombohan'ny option.news. Ka raha manana zavatra manan-danja ianao zarao ary te hametraka tsindry mahomby ...mandroso ho avy amin'ny hoavy!
nampian'i Helmut Melzer 19. Febroary 2020, 10: 09
Previous article Fialan-tsasatra amin'ny tontolo iainana Ny torohevitra 5 tsara indrindra WWF Alemana | Alemana WWF
Lahatsoratra manaraka Mihodina ny fifamoivoizana: fanentanana ho an'ny rehetra
Farany mandeha am-pianarana!
Nanohitra ny orana izahay mpikatroka tamin'ny alahady
I Michael O'Leary, lohan'i Ryanair izany. Manana 99 tapitrisa euro izy ...
Izahay dia faly mizara ity andiam-pivoriana ity aminao amin'ny lohahevitra hoe "5G sy Corona"
Ny tantaran'i George Floyd dia tsy raharaha mitokana - ampy izay.
Ny hazo fihinam-boa, ohatra, paoma, manga na papaya, dia afaka mamontsina amin'ny fiainana a ...
BIO-Strohhalme mpitsikilo maso - tsy ho an'ny eco-freaks ihany
Ny akotsaka BIO avy aminay dia vokatra voajanahary voajanahary maloto ary maniry amin'ny maharitra ...
Fialan-tsasatra amin'ny tontolo iainana Ny torohevitra 5 tsara indrindra WWF Alemana | Alemana WWF
Mihodina ny fifamoivoizana: fanentanana ho an'ny rehetra